नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): विजयजी, तपाईंले देशमा नेतै देख्नु भएन रे !
आफ्नो अज्ञानताका बारेमा ज्ञान हुनु ठूलो ज्ञान हो। तर, राजनीतिमा पनि यो ज्ञान गौण हुँदो रहेछ।
एक प्रसंगमा लेखक विजयकुमारले माघ २६, सेतोपाटीमा लेख्नु भएको छ–नेपालमा नेतै भएनन्। तर, सहमत हुन सकिनँ।
मेरो विमतिले भन्छ– नेपालको क्षेत्रफल, जनसंख्या र आवश्यकतालाई मानक बनाउने हो भने संसारमा सबैभन्दा बढी नेता भएको देश नेपाल नै होला!
प्रिय विजयजी, सबैलाई थाहा छ, पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। र, यो पनि थाहा छ; वास्तवमा नसकेको होइन नखोजेको हो। यहाँ फ्र्याङ्क्लिन डी रोजभेल्ट (१८८२–१९४५) ले भनेको एउटा जिउँदो सत्यको याद आउँछ– राजनीतिमा अकस्मात केही हुँदैन यदि भयो भने पनि त्यो त्यसरी नै प्लान गरिएको हुन्छ।
प्लान अनुसार नै पहिलो संविधानसभाको अवशान भएको हो कि होइन? प्लान अनुसार नै दोस्रो संविधानसभाले तोकेको मितिमा महाभारत पर्व मच्चाइएको हो कि होइन? नेताले नभए यो सब कसले गर्छ? यो प्लानको ‘लिडिङ् र ब्याकिङ्' गर्ने सामर्थ्य कोसँग हुने थियो? के त्यो नेता होइन?
माघ ५, २०७१ लाई इतिहासले भोलि सायद ‘संविधानसभाभित्र महाभारत' भनेर लेख्नेछ। (नेता) प्रचण्ड र बाबुराम युद्धभूमिबाट हाँस्दै निस्किएको तस्बिर त्यही इतिहासले सधैं देखाउने छ। के त्यो युद्धभूमिमा हाँस्न सक्ने मान्छे नेता होइन? सभा भनेको सभ्यता पनि हो, तर त्यसलाई असभ्य बनाएर हाँस्न सक्ने नेताबाहेक अरु को हुन सक्छ? तपाईंले कसरी देख्नु भएन त्यस्ता नेतालाई?
आफू हाँसेको तस्बिर उहाँहरु आफैंले देख्नु भयो, खुसी हुनु भयो। तर देश रोएको तस्बिर देख्नु भएन। हाँस्नु–खुसी हुनु अति राम्रो हो तर, देश रुँदा हाँस्न सक्नुलाई कति राम्रो मानिन्छ? देशले डाँको छोड्दा आफूले खित्का छोड्ने यस्ता नेतालाई तपाईंले कसरी देख्नु भएन विजयजी?
विजयजी, अहिले दोष एउटाले अर्कोलाई दिएका छन् तर यिनले आफ्नो दोष आफूले कहिले देख्छन्? मध्यरातसम्म कुरेर बसेका देशका करोडौं आँखाले त्यो महाभारत हेरिरहेका थिए। ताण्डव लीलापछि केहीले आफ्नो जित भएको ठाने। तर, विजयजी, तपाईंका आँखाले के देखे? जित कसको भयो, हार कसको?
मलाई त लाग्छ– सबै नेताले जिते। देशले हार्‍यो, जनता हारे। आफ्नै देश र जनतालाई हराएर आफूलाई महान् विजेता घोषित गर्ने प्राणी नेता नभए अरु को हुन सक्छ? यस्ता महान्‌लाई तपाईंले नेता नदेख्नुको अर्थ नेता नमान्नु पनि हुन सक्छ। नमान्नुको अर्थ अपमान पनि हुन सक्छ। नेपोलियन बोनापार्ट (१७५९–१८२१) ले त्यसै भनेका होइनन्– राजनीतिमा विसंगति कमजोरी होइन।
जनताबाट प्राप्त विश्वासको मतलाई आफ्नै देश हराउन र रुवाउन प्रयोग गर्ने मान्छे नेता नभएर को हुन सक्छ? एक वर्षभित्रमा संविधान पाउने खुसीमा भोट दिने जनतालाई दुःखी बनाउने अरु को हुन सक्छ? हुन त भोलि, जनताले यो दुःखको बदला लेलान् तर, त्यतिबेला ती नेता सायद अवशानको गहिरो गर्तमा विलिन भइसकेका हुनेछन्। तै पनि कसरी देख्नु भएन यस्ता नेतालाई तपाईंले?
झिँगाको पित्को बराबर निष्ठा र नैतिकता हुन्थ्यो भने मूल्य र मान्यताको राजनीति हुन्थ्यो होला! मूल्य र मान्यता अँगाल्न सकेको भए मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको हत्या हुने थिएन। मध्यरातमै दोस्रो संविधानसभाको गर्भ तुहाइने थिएन। के देशको भविष्यको हत्या गर्ने/गर्भ तुहाउने काम नेताबाहेक अरुले गर्न सक्छ?
विजयजी, नेपालमा नेता छैनन् भन्नु हुन्छ तर त्यसो भनेर यो मध्यरातको दोष कसलाई दिनु हुन्छ? त्यो पापको भार कसलाई बोकाउनु हुन्छ? त्यो अपराधको बोध कसलाई गराउनु हुन्छ? देशमा नेतै छैनन्। जे गरेका छन्, सबै जनताले गरेका छन् भनेर यस्तालाई भोट दिने जनतालाई नै कतै दोषी करार गराउन खोज्नु भएको त होइन?
रेमिट्यान्स, विदेशी ऋण र सहयोगबाट चलेको कंगाल देशलाई झन् कंगाल कसले बनाउँदै छन्? याद राख्नुस्, संविधान निर्माणका नाउँमा देशको झण्डै साढे एक खर्ब रुपैयाँ स्वाहा भइसकेको छ।
अघिल्लो वर्ष प्रकाशित एक जानकारी अनुसार पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभामा मङि्सरभित्र कुल १ खर्ब ४१ अर्ब ३४ करोड खर्च हुने बताइएको थियो। अहिले माघको अन्त्यतिर आइपुग्दा त्यो अङ्क निक्कै माथि पुगेको हुनु पर्छ।
पहिलो संविधानसभाका लागि ९१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कुरा संविधान नबनाउने सचिवालयले जनाएको थियो। पहिलो संविधान नबनाउने त्यो शोभाहीन सभाको चारवर्षे अवधिमा ६ सय १ को ‘खै त्यो के जाति' भन्ने बथानले ४ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रासनपानीबापत लिएको थियो। दुई वर्षभन्दा बढी आफ्नो आयु आफैं थपेको त्यो बथानले झण्डै अर्को साढे दुई अर्ब रुपैयाँ हजम गरेको हुनु पर्छ। यो हिसाबले ६ सय १ त्यो बथानको एक टाउकाको भागमा वर्षमा १८ लाख परेको छ।
राजनीति, धर्म र संविधान
विजयजी, नाङ्गा आँखाले र्हेनुस् त कति लज्जास्पद छ– विश्व अर्थतन्त्रमा बलियो बनेको शक्तिशाली राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको तलब केही दिन अघिसम्म करिब १ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। संसदका कुर्सी भाँच्ने, सडकमा तोडफोड गर्ने, ट्याक्सी जलाउने त्यो बथानका ‘माननीय'(?) हुन् कि ‘हाननीय'को तलब कम्तिमा पनि महिनाको १ लाख ५० हजार?
गरीब देशको खर्बौं नष्ट गरेर सात वर्षमा एउटा संविधान दिन नसक्दा पनि लज्जाबोध नगर्ने नेताबाहेक अरु को हुन सक्छ, विजयजी? होइन, यत्रो हुँदा पनि कसरी देख्नु भएन तपाईंले नेता?
संविधान निमार्णका नाउँमा अहिलेसम्म आइपुग्दा देशले झण्डै दुई खर्ब स्वाहा गरेको हुनु पर्छ। हिसाब गर्नुस्, दुई खर्ब रुपैयाँ भनेको कति धेरै पैसा हो? सोच्नुस्, कति ठूलो विकास–निर्माण हुन सक्थ्यो यो गरीब देशमा त्यो पैसाले?
त्यो पैसाले सघन अन्धकारमा डुबेको मुलुकलाई अलिकति उज्यालो दिन सकिन्थ्यो होला। त्यो पैसाले सिटामोल नपाएर मर्ने कति दिनदुःखी नेपालीलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला? त्यो पैसाले झाडापखालाले प्याकप्याक भएर प्राण त्याग्न बाध्य निरीह नेपालीलाई जीवनजल पियाएर ब्युँत्याउन सकिन्थ्यो होला? त्यो पैसाले आङ् छोप्ने एकसरो लुगा नभएर शीतलहरमा कठाङ्ग्रिएर मर्ने ती सयौं बेसहारा बूढाबुढीको प्राण रक्षा गर्न सकिन्थ्यो होला? बाध्यताले लघारेर अरबको तातो बालुवामा परेड खेल्न पुगेका युवालाई रोजगारी सिर्जना गरेर रोक्न सकिन्थ्यो होला? अबरका राक्षसहरुबाट लुछिन बाध्य कति नेपाली चेलीहरुको अस्मिताको रक्षा गर्न सकिन्थ्यो होला?
विजयजी, नेताप्रति आशा र विश्वास गरेर जनताले गाँस कटाएर दिएको हो कि होइन, त्यो पैसा? अब जनताले कि संविधान देऊ, कि संविधानका नाउँमा खाएको खर्बौं रुपैयाँ फिर्ता देऊ भने तपाईं के भन्नु हुन्छ? नेता छैनन् नभन्नुस्, नत्र तपाईं नै पर्नु होला नि! नेता नभए यो देशको हुर्मत काढ्ने र लुट्ने को हुन् त? तपाईंले राष्ट्रियताको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। परचक्रीको पाउ मोल्नु, अनुकूल हुन्जेल तिनकै इसारामा नाच्नु, तिनैले पाइन चढाएको खुर्पाले देशको घाँटी रेट्नु, प्रतिकूल भए तिनकै प्रचण्ड विरोध गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने राष्ट्रियता नेताको नभए कसको हुन्छ?
विजयजी, सहमत हुनुहन्छ/हुनुहुन्न, नेता धेरै भए तर नेताले नेताको अर्थ बुझेनन्। अर्थ नबुझ्नुको अर्थ हो, आफ्नो अज्ञानताको बारेमा ज्ञान नहुनु। त्यसैले माथि सुरुमै भनेको थिएँ नि, राजनीतिमा ज्ञान गौण हुँदो रहेछ।
क्रेचका अनुसार नेता दुईखाले हुन्छन्– औपचारिक र वास्तविक। औपचारिक नेता नैतिकतालाई अभियान बनाउँछन्, वास्तविकहरु आभूषण। त्यसैले वास्तविक नेतालाई असल र औपचारिकलाई खराब मानिन्छ। नेता नभएका होइनन्, वास्तविक मात्र नभएका हुन्।
मलाई यो पनि लाग्छ– नैतिकता र दृढता असल नेताका गुण हुन् भने शब्दाडम्बर खराब नेताका असल गुण हुन्।
नेता होइन, देशले अहिले त्यही वास्तविक अर्थात् असल नेता खोजेको छ। नेता हुनेले नेताको अर्थ बुझ्न सकेको भए अर्थ अनुसारको चरित्र र छवि निर्माण हुने थियो। तर विडम्बना! देखिने एउटा र गरिने अर्को कुलङ्गार प्रवृत्ति हावी हुँदा भावी पिढीले समेत नेताको त्यही कुलङ्गार विम्बलाई नै विरासतका रुपमा ग्रहण गर्दैछन्।
विजयजी, नेता नभएका होइनन्, वास्तविक नेता हुन् नसकेका मात्र हुन्। त्यसैले इटालियन दार्शनिक तथा इतिहासकार निक्कोलो माकियाभेली (१४६९–१५२७) ले भनेको कुरा हाम्रा नेताका हकमा ठ्याक्कै मिलेको छ– राजनीतिसँग नैतिकताको कुनै सम्बन्ध छैन।
माकियाभेलीको भनाइलाई अझै मूलमन्त्र ठान्नेहरु सबै पनि नेतै हुन् तर नेता नाउँका औपचारिक निमित्त पात्र मात्र। जो कोहीद्वारा केही निश्चित समय र कामका लागि नेता भनेर नियुक्त गरिएको हुन्छ। वास्तविक नेता नहुनु नै अहिलेको विडम्बना भने हो।
विजयजी, ‘नेतृत्वका लागि शिक्षा जननी हो' भनेर उनै रोजभेल्ट कालमा ‘डार्कहर्स'का नाउँले चिनिने अमेरिकी राजनीतिज्ञ वेन्डेल विल्कीको भनाइ अहिले सार्थक भएझैं लाग्छ। सोच्नुस् त, नेता नाउँका निमित्त पात्रहरुको मस्तिष्कमा अशिक्षाको अँध्यारो मुस्लोले ढाकेको छ कि छैन?
सक्नुहुन्छ भने लेखक जोन सी म्याक्स्वेल (१९४७)ले भर्खरै लेखेका कुरा एकचोटि ‘पात्रनेता'हरूलाई पढाइदिनु होला – नेता त्यो हो, जसलाई बाटो थाहा छ, जो बाटोमा हिँड्छ र बाटो देखाउँछ।
हुन त तपाईंले खोजेको नेता पनि यस्तै होला! यदि हो भने एउटा कुरा बुझ्नुस्– एउटा थियो मरिसक्यो, अर्को जन्मिन बाँकी नै छ।
विजयजी म यतिखेर बिपी कोइरालाको त्यो अमरवाणी सम्झिरहेको छु– एकमुठी माटो लिएर अन्तरआत्मालाई सोध, जे भन्छ त्यही गर!
मौका मिले फेरि लेख्दै गरौंला, भेट्दै गरौंला, सेतोपाटीमा।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७१ १६:५९:५०
तपाईंले देशमा नेतै देख्नु भएन रे !,